ဘဝ ဆက်တိုင်း ဆက်တိုင်း ကင်းမြီးကောက် နဲ့ တူတဲ့ သားသမီးတွေ မဖြစ်ကြ ပါစေနဲ့ – Shwe Naung
ဘဝ ဆက်တိုင်း ဆက်တိုင်း ကင်းမြီးကောက် နဲ့ တူတဲ့ သားသမီးတွေ မဖြစ်ကြ ပါစေနဲ့
Shwe Thuta | November 9, 2020 | Knowledge | No Comments
ကင်းမြီးကောက် ပမာ သားသ မီးတွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့ … ကင်းမြီးကောက် မိခ င်တွေရဲ့ သဘော သဘာဝ က ကလေးပေါက်ဖွား ပြီးတဲ့နောက်မှာ မိမိ ကေ လးတွေကို မိမိ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တက်ခိုင်းထားတာပါပဲ…. ကင်းမြီးကောက် အပေါက်ေ လးတွေဟာ ကင်းမြီးကောက် မိခင်ကြီးရဲ့ ကိုယ်မှာ နေရင်းနဲ့ ကင်းမြီးေ ကာက်မိခင်ရဲ့ ကိုယ်က အသားတွေကိုပါ တဖြေးဖြေး စားလိုက် ကြတယ်..
သူတို့ အမေလည်းေ သရော သူတို့လေးတွေ လည်း ကြီးလာ ရောပေါ့.. သူတို့ကိုယ်တို င် လည်း သွားနိုင် လာနိုင်ရုံမက ရှာဖွေ စားသောက် နိုင်နေပြီပေါ့… ‌ဘယ်လောက်ထိ ကင်းမြီးကော က်မကြီးရဲ့ ကိုယ်က အသားတွေကို စားလည်း ဆိုရင် ကင်းမြီးကော က်မကြီး သေဆုံးသွားတဲ့ အထိပေါ့.. ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခြေအနေကလည်း အဲ့ကင်းမြီးကောက်ပေါက်လေး တွေလို ဖြစ်နေတယ်… မိဘဖြစ်သူက ဘဝတေ လျှာက်လုံး ကိုယ့် သားတွေ သမီးတွေအတွက် မိမိဘဝကို သွေး ချွေးရင်းပြီး ပြုစုပျိုးထောင် ကြတယ်… ဒါပေမယ့် သားတွေ သမီးတွေ ကြီးလာတဲ့ အခါ ကိုယ်စီကိုယ်စီ အိမ်ထောင်ပြု လိုက်ကြတယ်… အဲ့အချိန် မိဘ‌တွေက အိုနေပြီလေ….
ထိုအခါ တချို့ သားသမီးေ တွက မိဘတွေကို ပြောကြ သေးတယ်.. အမေတို့ အသုံးမကျလို့ အဖေတို့ အသုံးမကျ လို့ ကျနော် ကျမတို့ဘဝ ဒီလိုဖြစ်နေတာတဲ့.. သနားစရာ အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့ မိဘတွေ ကို ပြန်လည်မစောင့်ရှောက်တဲ့အပြင် ပြစ်ထားလိုက်ကြတယ်.. အဲ့လို သားသမီးတွေဟာ ကင်းမြီး‌ကောက်တွေ နဲ့ ပမာတူညီပါတယ်..
ကင္းၿမီးေကာက္ ပမာ သားသ မီးေတြ မျဖစ္ပါေစနဲ႕ … ကင္းၿမီးေကာက္ မိခ င္ေတြရဲ႕ သေဘာ သဘာဝ က ကေလးေပါက္ဖြား ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ မိမိ ကေ လးေတြကို မိမိ ခႏၶာကိုယ္မွာ တက္ခိုင္းထားတာပါပဲ…. ကင္းၿမီးေကာက္ အေပါက္ေ လးေတြဟာ ကင္းၿမီးေကာက္ မိခင္ႀကီးရဲ႕ ကိုယ္မွာ ေနရင္းနဲ႕ ကင္းၿမီးေ ကာက္မိခင္ရဲ႕ ကိုယ္က အသားေတြကိုပါ တေျဖးေျဖး စားလိုက္ ၾကတယ္..
သူတို႔ အေမလည္းေ သေရာ သူတို႔ေလးေတြ လည္း ႀကီးလာ ေရာေပါ့.. သူတို႔ကိုယ္တို င္ လည္း သြားနိုင္ လာနိုင္႐ုံမက ရွာေဖြ စားေသာက္ နိုင္ေနၿပီေပါ့… ‌ဘယ္ေလာက္ထိ ကင္းၿမီးေကာ က္မႀကီးရဲ႕ ကိုယ္က အသားေတြကို စားလည္း ဆိုရင္ ကင္းၿမီးေကာ က္မႀကီး ေသဆုံးသြားတဲ့ အထိေပါ့.. ယေန႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခအေနကလည္း အဲ့ကင္းၿမီးေကာက္ေပါက္ေလး ေတြလို ျဖစ္ေနတယ္… မိဘျဖစ္သူက ဘဝတေ လွ်ာက္လုံး ကိုယ့္ သားေတြ သမီးေတြအတြက္ မိမိဘဝကို ေသြး ေခြၽးရင္းၿပီး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ၾကတယ္… ဒါေပမယ့္ သားေတြ သမီးေတြ ႀကီးလာတဲ့ အခါ ကိုယ္စီကိုယ္စီ အိမ္ေထာင္ျပဳ လိုက္ၾကတယ္… အဲ့အခ်ိန္ မိဘ‌ေတြက အိုေနၿပီေလ….
ထိုအခါ တခ်ိဳ႕ သားသမီးေ တြက မိဘေတြကို ေျပာၾက ေသးတယ္.. အေမတို႔ အသုံးမက်လိဳ႕ အေဖတို႔ အသုံးမက် လို႔ က်ေနာ္ က်မတို႔ဘဝ ဒီလိုျဖစ္ေနတာတဲ့.. သနားစရာ အသက္႐ြယ္ႀကီးလာတဲ့ မိဘေတြ ကို ျပန္လည္မေစာင့္ေရွာက္တဲ့အျပင္ ျပစ္ထားလိုက္ၾကတယ္.. အဲ့လို သားသမီးေတြဟာ ကင္းၿမီး‌ေကာက္ေတြ နဲ႕ ပမာတူညီပါတယ္..
ေျခေထာက္ အဆိပ္ထုတ္စက္ ရဲ႕ လူသိနည္း တဲ့ လိမ္စင္ ေနာက္ကြယ္က လုပ္ကြက္(႐ုပ္သံ)
နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ကိုလှပအောင် မိတ်ကပ် လိမ်းချယ်ပေးနေတဲ့ မိတ်ကပ်ဆရာ အတွက် ဖုန်းလေး တစ်လုံး လက်ဆောင်ပေးခဲ့……..
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့် ည နဲ့ လွဲမှားေ နတဲ့ အယူအဆ… တန်ဖိုးမဖြ တ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ
မိဘများက မိသွားသောအခါ ခွေးစာများကို ခိုးစားနေတာ သူမ ခိုးစားသည်ကို ဝန်မခံဘဲ မစားရကြောင်း မိဘနှစ်ပါးကို အပြိုင် ငြင်းနေသည့် ကလေးမလေး၏ ချစ်စဖွယ်အမူအရာလေး….